I-Adobe Flash inikezela ku-HTML5 futhi idonsa amadivayisi eselula | Kusuka kuLinux
Abakwa-Adobe bamemezele ukuthi izoyeka ukuthuthuka Flash ngokuphequlula kusuka kumadivayisi eselula. Isizathu ukuthi njengamanje I-HTML5 isivele isebenza kulawa madivayisi, kwezinye izimo kuphela. Ngakho-ke, sekuyisixazululo esihle kakhulu sokubonisa okuqukethwe kuzingxenyekazi ukuhamba.
Enye yezinkampani zokuqala ukushiya ifomethi ye-Adobe kwakuyi-Apple. Eqinisweni, uSteve Jobs waze wachaza ukuthi kungani ezonda uFlash ngoMeyi wonyaka odlule ku incwadi evulekile.
Kodwa-ke, i-Adobe ayisiphendulanga lesi siqephu ku- ukungena webhulogi lapho uDanny Winokur, iphini likamongameli kanye nemenenja jikelele yokuthuthukiswa kokusebenzisana kwe-Adobe, adlulise khona isinqumo esenziwe yinkampani.
Kuyo, ukhumbula ukuthi "isikhathi esingaphezu kweminyaka eyishumi, iFlash ivumele okuqukethwe okucebe kakhulu ukuthi kudalwe futhi kusetshenziswe kuwebhu." Kodwa-ke, i-HTML5 manje "isekelwa indawo yonke kumadivayisi eselula abaluleke kakhulu, kwezinye izimo kuphela." Lokhu, bachaza, kwenze lolu limi lwaba "yisixazululo esihle kakhulu sokwakha nokubonisa okuqukethwe kusiphequluli kuzingxenyekazi zeselula."
1 Izinkinga ze-Flash
2 Amaphutha abucayi
Kepha iFlash bekuyitheknoloji yokuphathelene eyi-XNUMX% evela ku-Adobe, futhi ngaphezu kokuthi labo abayisebenzisayo kumele bafinyelele esivumelwaneni sokuyinikeza ilayisense (noma ngabe kumahhala kubasebenzisi bokugcina), ezinye izinhlobo zezinkinga zaziwa isikhathi eside isikhathi.
Enye yazo ukuthi ngenxa yemvelo yayo ngumthengi othanda kakhulu we-CPU, into abasebenzisi abayibona ngokuphelele lapho bevakashela amakhasi anezinto ezifakiwe zeFlash: ukusetshenziswa kweprosesa kuyanda futhi kwesinye isikhathi ezinye izinhlelo ziba nemiphumela.
Kepha inkinga enkulu kunazo zonke kwakungekhona lokho, kepha lokho kusetshenziswa kusho kumadivayisi afana nomakhalekhukhwini noma amaphilisi: ukunciphisa impilo yebhethri, into ephikisana nesipiliyoni sokusebenzisa ithuluzi elizimele ngokunciphisa kakhulu ukuzimela kwalo.
Kulokhu kumele kungezwe ukuthi izinhlobo zakamuva zigxekwe kabanzi ngokuhlushwa izimbungulu nezimbungulu ezincane ezenze ukuthi isiphequluli "sishayeke" futhi kwafanele siqale phansi.
Ukukhathala ukubona ukuthi izinkinga zokusebenza, ukusetshenziswa nezimbungulu azixazululwanga, futhi ngokuya ngeplatifomu eyi-100% ephethwe i-Adobe, uSteve Jobs uqobo ushicilele incwadi evulekile kuwebhusayithi ye-Apple ngenhloso yokuchaza ukuthi kungani bekungafanele bafake iFlash in i-iPad.
Udaba belunokuvuvukala okuncane, futhi nesinqumo besingabuzwa impela, kepha imisebenzi ibiqinisile: i-iPad ne-iPhone zingaphila ngokuphelele ngaphandle kweFlash, ngoba bekukhona ezinye izindinganiso zokubuka amavidiyo futhi amakhasi amaningi asukile kuye ngeFlash ukusebenzisa i-HTML5 ngaphezulu yesimanje, iyahambisana futhi ivulekile.
Ngaphandle kwalokhu, bathi bazizwa "bejabule" ngalo mbono futhi bazoqhubeka nokusebenza "nabadlali abakhulu emphakathini we-HTML5, kufaka phakathi iGoogle, iApple, iMicrosoft neRIM."
Baphinde bamemezela ukuthi yize bengeke baqhubeke nokwenza iFlash ukuze basebenze neziphequluli zeselula ngemuva kokukhishwa kweFlash Player 11.1 ye-Android neBlackBerry Playbook, bazoqhubeka nokuhlinzeka ngezibuyekezo zokuphepha nokulungisa izimbungulu ezibucayi kulungiselelwa okukhona.
Kodwa-ke, lokhu akusho ukuthi inkampani ihlela ukushiya iFlash ngokuphelele, kepha kunalokho ukuthi izosebenza ezindaweni lapho ikholelwa ukuthi ingaba "nomthelela omkhulu embonini", efana nemidlalo noma ividiyo.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » I-UseLinux yeFayileLet » I-Adobe Flash inikezela nge-HTML5 futhi idonsa amadivayisi eselula
UJavier Debian Bb Ar kusho
Yebo Yebo! (Ihlombe)
Phendula kuJavier Debian Bb Ar
Inyama yenkukhu kusho
Ngokwethembeka, angikhathali noma ngabe i-adobe inyamalale ngokuphelele ngoba ayinikeli ngalutho ku-linux, ibheka thina abasebenzisi be-linux
Yini okusha kuFirefox 9 beta